COVID-19: Antontan'isa momba ny fividianana ny mpividy sy ny #StayAtHome | Martech Zone
Ny zavatra dia tsy mijery tsara loatra amin'ny ho avin'ny toekarenan'iza na iza, noho ny areti-mandoza sy ny baiko fanidiana manaraka avy amin'ny governemanta manerantany. Mino aho fa ity dia hetsika iray manan-tantara izay hisy fiatraikany lehibe sy maharitra eo amin'ny tontolontsika… hatramin'ny fisondrotan'ny fatiantoka orinasa sy ny tsy fananan'asa, na dia hatramin'ny famokarana sakafo sy ny lojikajika aza. Raha tsy misy zavatra hafa, io areti-mandringana io dia naneho fa malemy ny toekarentsika manerantany.
Izany dia nilaza fa ny toe-javatra an-tery toa izao dia mampifanaraka ny mpanjifa sy ny orinasa. Rehefa manao ny anjarany ny orinasa ary miasa ny mpiasa ao an-trano, dia hitanay ny fandraisana an-tanana ny fifandraisana an-tsary. Angamba ho tonga amin'ny ambaratonga fampiononana isika amin'ity asa ity izay ahafahana mihena ny dia amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy - mampihena ny vidin'ny asa ary koa manampy ny tontolo iainana. Tsy vaovao tsara ho an'ny indostrian'ny dia sy zotram-piaramanidina, saingy azoko antoka fa hizatra izy ireo.
Ny OwnerIQ, azon'i Inmar tao amin'ny Q4 2019, dia manome fomba fijery kely momba ny fomba ampifanarahan'ny mpanjifa ny fari-piainany vaovao mijanona ao an-trano, miantsena avy any an-trano, ary manitsy ny fomba fividianany ny vokatra mifanaraka amin'izany. Ny OwnerIQ dia nandinika ny angon-drakitra mpivarotra an-tserasera avy amin'ny CoEx Platform mba hanomezana ny vaovao, izay natolotr'izy ireo sary tamin'ny sary, Manao ahoana ny mpanjifa #StayingHome.
Fiovan'ny fitondran-tena COVID-19 an'ny mpanjifa
Mazava be amin'ny sary fa mandany vola fanampiny amin'ny entana maromaro ny mpanjifa:
Fitaovana mifandraika amin'ny birao - manatsara ny fampiononany sy ny famokarany ary miasa eo amin'ny biraon'ny tranony.
Atmosfera an-trano - Fampiasam-bola amin'ny entana izay mampahazo aina kokoa ny mijanona ao an-trano.
Personal Care - fampiasam-bola amin'ny entana manamaivana ny sainy amin'ny adin-tsaina ateraky ny areti-mandringana sy ny fitokana-monina.
Home Care - satria mandany fotoana any an-trano izahay ary tsy mivoaka, dia mampiasa tetikasa amin'ny trano sy ny manodidina anay izahay.
Xtensio: Mamorona, mitantana ary asehoy ny fiantohana famoronana anao